उनीहरू भन्छन् आँखा कि - प्राणको ऐना। आँखा साँच्चै महत्वपूर्ण। उनको स्वास्थ्य कायम राख्न, तपाईं आफ्नो जीवन को गुणस्तर लागि धेरै गरिरहेका छन्। तर, धेरै मान्छे नियमित एक नेत्र रोग विशेषज्ञ भ्रमण र आफ्नो आँखा को राज्य जाँच्न बिर्सन्छन्। तिनीहरूले शायद उनलाई सोच्न। यो एउटा गम्भीर गल्ती हो! यो आँखा तपाईं पनि शक छैन जो बारेमा रोगहरु को एक किसिम, को उपस्थितिको सचेत गर्न सक्ने बाहिर जान्छ। आँखा आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति देखाउन, आफ्नो अवस्था पनि जीव को धेरै अन्य सुविधाहरू सम्बन्धित छ। क्यान्सर उच्च दबाव देखि, दृष्टि सीधा रोगहरु को एक सम्पूर्ण सूची लिङ्क हुन सक्छ। तिनीहरूलाई केही पूरा।
आँखा फैलएको लास 'रोग संकेत गर्न सक्नुहुन्छ
जब तपाईं ऐनामा हेर्न, तपाईँले आफ्नो आँखा पनि प्रमुख ठान्छन् छैन? लास 'रोग को लक्षण मध्ये एक छ जो राज्य, - यो सिर्फ पनि कारण ekzoftalmozom गर्न भद्दा हेर्न छैन, तर हुन सक्छ। यो नाम अन्तर्गत थाइरोइड ग्रन्थि वृद्धि गतिविधि लुकाउँछ। रोग संग मान्छे को बारेमा तीस प्रतिशत आँखा सम्बन्धित केही संकेत र लक्षण सामना गर्दै हुनुहुन्छ। कारण रोग सुनिंनु गराउँछ र मांसपेशीमा र आँखा वरपरका Tissues असर छ। दृष्टि सम्बन्धित अन्य लक्षण, नजरमा बेचैनी, प्रकाश, bifurcated दृष्टि वा आफ्नो पनि हानि गर्न दबाब वा दुखाइ, सुन्निएको परेलिहरु, रातो-rimmed र bloodshot आँखा, संवेदनशीलता एक भावना हो। साथै, लास 'रोग संग मान्छे अक्सर, वजन स्नायु बन्न, बारम्बार, अनियमित नाडी भन्छन्। रोग पुरानो मान्छे र महिला सामान्य छ। यो डर आवश्यक छैन, तपाईं सजिलै रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं चेतावनी संकेत नोटिस भने, चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् सुनिश्चित।
को आइरिस को खैरो किनारा
तपाईं आइरिस किनारा वरिपरि खरानी, आँखा को रंग भाग याद छ? यो घटना हृदय आक्रमण गर्न जान्छ कि शरीर मा ट्राइग्लिसराइड्स को एक उच्च सामग्री कारण हुन सक्छ। को आइरिस को खैरो रिम नजरमा बोसो जम्मा सिर्जना गर्छ। तपाईं यसलाई नोटिस भने, तपाईं साठी अन्तर्गत छन्, विशेष गरी यदि एक रक्त परीक्षण गर्न निश्चित हुन। तपाईं व्यायाम संग र चीनी, अस्वस्थ बोसो र तेल अप दिने रूपमा, अनाज, फल र तरकारी मा धनी आहार उपयोगी को मद्दतले आफ्नो शरीर को राज्य समाधान गर्न सक्छन् साथै।
यस पटल को सुनिंनु छाला क्यान्सर संकेत गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं छक्क हुनेछ, तर छाला क्यान्सर पनि परेलिहरु को किनाराको मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं inflamed र साथै तपाईं परेलाहरु गुमाउन रूपमा जाने छैन भएको एक घाउ छ भने, तपाईं एक डाक्टर गएर बारेमा विचार गर्नुपर्छ। सायद तपाईं कार्सिनोमा। यो रोगले संग मान्छे पटल मा रातो स्थान देख्यौं। सानो ट्यूमर सामान्यतया तल्लो पटल असर गर्छ, तर पनि माथि देखा पर्न सक्छन्। प्रभावित क्षेत्र वरिपरि परेला हानि ट्यूमर को घातक प्रकृति संकेत गर्छ। तपाईं यो लक्षण नोटिस भने, यसलाई बेवास्ता छैन र सबै जानेछ आशा छैन। आफ्नो डाक्टर भ्रमण र नआत्तिनुहोस्, रोग निको गर्न सकिन्छ। तपाईं आफ्नो अवस्था बेवास्ता गर्नुहुन्छ भने, तपाईं अन्धो र पनि मृत्यु को लागि प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
Overhanging परेलिहरु एक autoimmune रोग संकेत गर्न सक्नुहुन्छ
अचानक आफ्नो परेलिहरु करघा गर्न थाले याद भने, कारण उमेर मात्र हुन सक्छ। Ophthalmologists को overhanging परेलिहरु मांसपेशी कमजोरी सम्बद्ध autoimmune रोग एक प्रकटीकरण हुन सक्छ तर्क। यो रोग संक्रामक छैन र जन्मजात छैन। आफ्नो आँखा को अवस्था मा कुनै पनि अन्य परिवर्तनहरू संग मामला छ, यो यो तपाईं खतरामा हुनेछ अघि उहाँले निदान हुनेछ, आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्नुपर्छ। Autoimmune रोग घातक हुन सक्छ, तर राम्रो उपचार संग जीवन गुणस्तर सुधार गर्न एक उत्कृष्ट मौका छ।
Overhanging परेलिहरु र विभिन्न आकार को pupils जीवनको खतरा संकेत
विशेष लक्षण को खतरनाक संयोजन तपाईं एक Horner गरेको सिंड्रोम छ भनेर संकेत गर्छ हुन सक्छ। तपाईं विभिन्न आकार को आफ्नो pupils र परेलिहरु रचनाहरू याद भने, तुरुन्तै चिकित्सा ध्यान खोज्नुपर्छ। यो अवस्था एक aneurysm वा घाँटी ट्यूमर सम्बन्धित हुन सक्छ। Horner गरेको सिंड्रोम - एक दुर्लभ अवस्था। उमेर, लिंग वा जाति यसको सम्बन्ध मा अज्ञात। उपचार को परिणाम विशेष गरी व्यक्तिगत छन्। सर्त जस्तै यथासक्य गम्भीरता साथ उपचार गर्नुपर्छ।
केही रोगहरु मात्र नेत्र रोग विशेषज्ञ नोटिस गर्नेछन्
आफ्नो आँखा र आफ्नो स्वास्थ्य असर लक्षण केही, तपाईं आफैलाई ऐनामा देखिने र अन्य एक डाक्टर मात्र पाउन सक्षम हुनेछ। कि यो आँखाको मात्र होइन स्वास्थ्य, तर पनि आफ्नो जीवन बचाउन सक्छ, तपाईं सालाना एक नेत्र रोग विशेषज्ञ भ्रमण गर्नुपर्ने छ। उदाहरणका लागि, एक डाक्टर एचआईभी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो एउटा डरलाग्दो रोग रेटिना एक गम्भीर सुनिंनु मार्फत नजरमा नै प्रकट गर्न सकिन्छ। म डाक्टर मात्र सही चश्मा चयन गर्न सक्षम छ भन्ने लाग्छ छैन। तालिका आँखा परीक्षाहरू जीवन सुरक्षित तपाईँको जीवनको लागि हुन सक्छ!
तपाईंको नेत्र रोग विशेषज्ञ वृद्धि दबाव नोटिस सक्छ
वार्षिक परीक्षा समयमा, डाक्टर रेटिना मा उच्च रक्तचाप लक्षण पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। वृद्धि दबाव सजिलै चिकित्सक नोटिस कि रेटिना मा सानो रक्त नली को विकृति गराउँछ। किनभने यो तपाईं एक हृदय आक्रमण रोक्न मद्दत गर्नेछ यी लक्षण नोटिस समय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं यस्तो समस्या को डर छैन भने, तपाईंले यो अवस्था आँखा, धमिलो दृष्टि मा आक्रान्त हुन सक्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ र पनि यसको हानि पूरा गर्नुहोस्। तपाईंले पहिले नै यस्तो लक्षण नोटिस भने, तुरुन्तै मदतको लागि एक विशेषज्ञ परामर्श। उच्च दबाव आहार र दबाइ मार्फत हुन सक्छ जीत, त्यसैले आफ्नो हृदय को राज्य को लागि हेर्न र नियमित मेडिकल परीक्षा पास।
आँखा मधुमेह बारेमा बोल्न?
मधुमेह - अर्को रोग विशेषज्ञ चिन्ह लगाइयो। डाक्टर मधुमेह को एक चिन्ह हो जो रेटिना र बोसो को yellowish निशान, मा सानो रक्त थक्के नोटिस सक्छ। जो अन्धो सक्छ रेटिना, ग्रस्त यो रोग को फलस्वरूप। तपाईं मधुमेह भनेर थाहा छैन भने, तपाईंले एक दिनचर्या आँखा चेक-अप मद्दत गर्न सक्छ। तपाईं पहिले नै रोग बारे थाहा छ भने, तपाईं आँखा को स्वास्थ्य को हेरविचार गर्नुपर्छ। समस्या को प्रारम्भिक ठेगाना लगान नब्बे-पाँच प्रतिशत मा अन्धो को जोखिम कम गर्छ।
आँखा समस्या स्तन क्यान्सर को एक चिन्ह हुन सक्छ
धेरै मानिसहरू स्तन क्यान्सर mammogram पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ लाग्छ। कहिलेकाहीं पहिलो साइन एक नेत्र रोग विशेषज्ञ एक यात्रा समयमा देख्न सकिन्छ। आँखा शरीर र प्रसार अन्य भागमा घातक ट्यूमर। कहिलेकाहीं तिनीहरूले आँखा असर गर्न सुरु नगरेसम्म पत्ता सकिन्छ। सबैभन्दा विरामीहरु यी लक्षण सामना छैन, तर, दृष्टि र आँखा अवस्थामा परिवर्तन एक ट्यूमर एकदम सम्भव छ जब। तपाईं झिंगा वा अन्य समस्या आँखा अघि प्रकाश को एक फ्लैश हेर्न भने, तपाईं चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्नुपर्छ।
आफ्नो आँखा सुरक्षा, तपाईं को स्वास्थ्य सुरक्षा गर्दै
आँखा को एक राज्य, साँच्चै डरलाग्दो मा नै प्रकट गर्न सक्ने रोगहरु केही। मुख्य कुरा हो - आँखाको अवस्था र के तिनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ निगरानी गर्न। समस्या को तीव्र पत्ता लगाउने तपाईं समयमा स्वास्थ्य सुधार गर्न एक उपचार पाउन मदत गर्न सक्छ। सम्झना, कहिलेकाहीं लक्षण पत्ता लगाउने आफ्नो जीवन बचाउन सक्छ! गर्नुपर्छ सालाना एक नेत्र रोग विशेषज्ञ जानुहोस्।
आफ्नो आँखा घरमा परीक्षण गर्न कसरी। सरल सुझाव
एक सुरिलो परिदृश्य सिर्जना गर्न: बगैचा बाटाहरू लागि प्लास्टिक टाइल
Mayan भविष्यवाणी - एक आविष्कार वा अपरिहार्य वास्तविकता?
शहर र देश: टावर "बुर्ज खलिफा" कहाँ छ